प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिप्रश्नः छानबिन गर्न कसले रोक्यो? - Malayakhabar
होम पेज देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको प्रतिप्रश्नः छानबिन गर्न कसले रोक्यो?
काठमाडौं := जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुरा होइन काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। बूढीगण्डकी आयोजनामा अर्बो अनियमितता भएको आफ्नो भनाइको प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेपछि डा. भट्टराईले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
अघिल्लो लेख साउदीमा १ हजार १३१ अवैधानिक नेपाली कामदारलाई बहिर्गमन भिसाको अवसर।
पछिल्लो लेख मलेसियामा कोरोना भाइरसले आज पुनः ६ जनाको मृत्यु,आजमात्रै ६२९ नयाँ संक्रमित फ़ेला।